Dackestupet - igwe kwụ otu ebe na ịgba ugwu | Nleta Hultsfred
Dackestupet - igwe kwụ otu ebe na ịgba ugwu
hem » Hụ & mee » Ihe » Cygba ígwè » Dackestupet - igwe kwụ otu ebe na ịgba ugwu
Site n’elu mkpọda mkpọda ugwu nke Dackestupet, ị ga - ahụ echiche dị egwu banyere mbara ala Småland. Na njem na mkpọda ugwu ahụ, ị ​​gafere ihe mgbochi wuruwuru dịka nfuli, velodrome, steepụ log na drips.
Jikọtara na ndị na-ekwenye ekwenye na ndị ọzọ magburu onwe ha, ọrịrị siri ike na-alaghachi n'akụkụ ndị ọzọ na teknụzụ dị elu, ị na-eche ihe ịma aka ihu. N'ebe kacha sie ike na mpaghara ahụ, ị ​​dara ihe ruru 110 mita n'ịdị elu!
Ọ bụrụ na ịnweghị njikere n'ezie maka nsogbu a, ị ga-ahọrọ akara aka dị nwayọ nwayọ ma n'ime elu Dackestupet na gburugburu ya.
Zọ ndị a na-amalite n’elu mkpọda ugwu nke Dackestupet ma ebe a nwere ebe a na-adọba ụgbọala, ogige teknụzụ, ebe ọkụ na ihe ndị ọzọ.
Ogwashi-Uku, Green 0,8 km
Lilla Dacke bu uzo ndu ndu ndu ohuru na ndi n’eto MTB kpakpando na ndi obi uto. Ebe dị mma ịmalite ma nweta nsị ahụ na eriri dị mma, họrọ gia kwesịrị ekwesị n'oge kwesịrị ekwesị na breeki ebe ọ dị mkpa. N'ezie, ọ na-arụ ọrụ nke ọma dị ka ezigbo onye na-ekpo ọkụ maka onye ọ bụla tupu ịmalite ụzọ ndị siri ike. Echefula ihe mgbochi ọrụ bara uru ma na-atọ ọchị a na-etinye n'okporo ụzọ n'oge ọkọchị!
Dackesvängen, Uhie 3,3 km
Pearl nke ụlọ ọrụ ahụ na-enye ma ọmarịcha ngagharị na-agba ọsọ na oke ugwu siri ike! Maka oge nke afọ a, ụzọ ahụ natara ọtụtụ mmụba, na-elekwasị anya n'inye ezigbo onye na-agba ịnyịnya ohere ịnwe ọsọ na ọsọ maka ogologo oge.
Ogbenye, nke nwoke 3,2 km
Ọ na-amasị gị ịma aka?! N'ime akaghị a ị ga-enweta ọmarịcha njem na mkpọda ski. Get gafere ihe mgbochi wuru dịka nfuli, velodrome, log steepụ & ntapu. Njikọ ahụ dịgasị iche n'etiti nkwekọrịta & akụkụ ndị mara mma, ịrị elu siri ike na akụkụ teknụzụ dị elu. Nke a na loop nwere ọtụtụ ngalaba dị iche iche na mgbe ị laghachiri n'elu, ị banyela ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ 110 mita nke elu! Ugboro ole ka ị nwere ike ijikwa?
Egwuregwu, Blue 1,2 km
A ubé obiọma ma na-atọ ụtọ akaghị na awade ụtọ ugwu biking maka onye ọ bụla. Ọ dị obere oge site na mpaghara ịgba ịnyịnya ígwè Dackestupet, mana ị na-agba okirikiri ebe a na azụ site na mpaghara ahụ. Site ebe a ị nọkwa nso na obodo Virserum ma ọ bụrụ na agụụ kọfị dị ukwuu.
Mgbidi XC, Blue 1 km
Trazọ ahụ dị mkpụmkpụ ma dịkwa njọ, ụzọ ị ga-esi na-agagharị ugboro ugboro tupu ịnwale nhọrọ na nhọrọ nhọrọ kachasị amasị gị. A na - ezute gị site na ịgbatị dị mma, ịrị elu teknụzụ na ọchị ọchị na gburugburu dị egwu.
Gụkwuo banyere igwe kwụ otu ebe na weebụsaịtị BikingSouthEast
Mọnde: EmechielaTuesday: EmechielaWenezdee: EmechielaTọzdee: EmechiriFraịde: EmechielaBọchị Satọde: 10–16Bọchị Sọnde: 10–16
Ikgba Biking South East
Akwụkwọ 1, 570 80 Virserum
Nyocha 79 na Google
Ọ dị mma 👍
4/5 ọnwa 11 gara aga
4/5 ọnwa 5 gara aga
4/5 ọnwa 8 gara aga
5/5 ọnwa 11 gara aga
Abalị kachasị mma!
Paintball na Lönneberga
Adlọ mgbatị ahụ n'èzí Hagadal
2021-07-02T14:49:04+02:00Nature & n'èzí ndụ, Egwuregwu|
Omume egwuregwu niile